कांग्रेसकी चर्चित सांसदले जन्माइन बिबाह नै नगरी बच्चा ! – Online Khabar 24
एक चर्चित सांसदले बिबाह नै नगरी बच्चा जन्माएकी छिन्।
अभिनेत्रीसमेत रहेकी तृणमूल कांग्रेस टीएमसीकी नुसरत जहाँले बिबाह नगरिकनै बच्चा जन्माएकी हुन्। बाबुको टुङ्गो नभएरै छोरा जन्माएपछि नुसरत तनावमा छिन्। अभिनेत्रीले एक छोरालाई जन्म दिएकी हुन्।आमा बनिसकेपछि फ्यान र सेलिब्रेटीहरु नुसरतलाई बधाई दिइरहेका छन्।
नुसरत जहाँको गर्भावस्थाको बारेमा धेरै विवाद भएको थियो। नुसरत धेरै दिन देखि गर्भवती भएको खबरहरु आएका थिए। पछि नुसरतले बेबी बम्प देखाउँदै सार्वजनिक गरेको तस्विर भाइरल भयो। त्यसपछि उनको गर्भावस्था पुष्टि भयो।
जब नुसरतको गर्भावस्थाको खुलासा भयो, त्यस समयमा उनी पति निखिल जैनसँग अलग भएको कुरा चर्चामा थियो। नुसरतको २०१९ मा निखिल जैनसँग विवाह भएको थियो। तर यस वर्ष भएको तनावपछि उनीहरु अलग भएका छन्। नुसरतको गर्भावस्थामा निखिल जैनले भनेका थिए कि उनी यस बारेमा केहि जान्दैनन्।
उनले त्यसबेला पेटमा हुर्कदै गरेको बच्चा आफ्नो नभएको बयान दिएका थिए । त्यसबीच, नुसरत जहाँको अभिनेता यश दासगुप्तासंग अफेयर भएको चर्चा चल्यो। नुसरत जहाँ र निखिल जैनले सार्वजनिक रुपमा एक अर्का बिरुद्ध धेरै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। निखिलले नुसरत र यश दासगुप्ताको अफेयर तिर इशारा गरेका थिए।
यद्यपि निखिलले सीधै यशको नाम लिएनन्। तर यो पक्कै संकेत गरिएको थियो कि उनीहरुको सम्बन्धमा तनाव यशको कारणबाट आएको हो।नुसरतले निखिलसँगको बिहे अमान्य भन्दै अलग भएपछि आफ्नो एक बयानमा भनेकी थिइन्, ‘टर्की विवाह नियमनको अनुसार, एक विदेशी भूमिमा भएकोले, विवाह अमान्य छ।
किनकि यो दुई फरक धर्मका मानिसहरु बीचको एक विवाह थियो, त्यसैले त्यसलाई भारतमा कानूनी मान्यता दिन आवश्यक थियो। आवश्यक थियो तर यो भएन्। नुसरतले थप्दै भनेकी थिइन्, ‘कानूनी रूपमा यो विवाह मान्य छैन, तर एक सम्बन्ध वा लिभ–इन सम्बन्ध हो।
त्यसैले सम्बन्ध विच्छेदको प्रश्न उठ्दैन। नुसरतले निखिललाई आफ्नो खाताबाट पैसा निकालेको आरोप समेत लगाएकी थिइन्। यता, निखिलले पनि आरोप लगाए कि नुसरत जहाँ विवाह दर्ता गर्नबाट भाग्दै थिइन्।
यसैगरि, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई वितरणका ओम सत्य साई प्रालि पर्सालेले साइकल खरिद गरेको खुलासा भएको छ। साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको एक सातापछि साइकल खरिद गर्ने कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएको हो।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बुधबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर साइकल खरिद प्रकरणमा आफ्नो धारणा राख्नुभन्दा अघि यो विषय सार्वजनिक भएको हो। साइकल खरिदका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दुई खेपमा २७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिद गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पहिलो लटको १७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिदका लागि ५ वटा कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको थियो।
ओम सत्य साई प्रालि पर्साले प्रति थान ५ हजार ७ सय, सान्यो इन्टरनेसनल जेभी काठमाडौंले ७ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ, द डिजाइनर्स नेपाल भरतपुरले ६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ, म्याप इन्टरप्रिन्युर्स काठमाण्डौंले ६ हजार १ सय ५० र विकास जेनरल ट्रेडिङ जनकपुरले ८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ प्रतिसाइकल खरिद गर्ने टेन्डर हालेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम कबोल गरेका ओम सत्य साई प्रालिलाई साइकल खरिदको सहमति दिएको थियो । प्रालिले भारतीय कम्पनी अम्बिकामार्फत ९ करोड ८२ लाख ५६ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँमा १७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिद गरेको थियो ।
यस्तै, दोस्रो लटमा खरिद गरिएको १० हजार साइकलको इबिडिङमा तीनवटा कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
पहिलो लटमा साइकल खरिदको ठेक्का पाएका ओम सत्य साई प्रालिले दोस्रो लटको साइकल खरिदको ठेक्कामा प्रतिसाइकल ७ हजार ५ सय, सान्यो इन्टरनेसनलले प्रतिसाइकल ७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ र म्याप हेलिक्स जेभी काठमाडौंले पनि टेन्डर हालेकोमा उनको कागजी प्रक्रिया नपुग्दा रद्द गरिएको थियो ।
दोस्रो लटको साइकल खरिदमा कम मूल्य कबोल गरेका सान्यो इन्टरनेसनलले भारतीय कम्पनी हाई इन्ड ब्राण्डको साइकल खरिद गरेको थियो । साइकल खरिदको सबै प्रक्रिया कानुनबमोजिम नै भएको हो । कहीँकतै खरिदमा समस्या देखिन्न,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘मेरो छविलाई बद्नाम गराउन नियतवश अख्तियारको छापा मार्न लगाइयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पहिलो लटभन्दा दोस्रो लटको साइकल एक केजी हेभी र अत्याधुनिक रहेकाले प्रतिसाइकल खरिद मूल्य बढेको दाबी गरेको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साइकल खरिद गर्दा प्रचलित खरिद कानुन पूर्णरुपमा पालना गरी प्राविधिकबाट तयार गरिएको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमानका आधारमा विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान गरिएको दाबी गरेको छ ।
‘दोस्रो लटमा खरिद गरिएको साइकलको खरिद मूल्य बढनुको ३ कारण छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कागजातमा भनिएको छ,‘प्राविधिक स्पेसिफिकेशसनमा साइकलको नेट कुल तौल १९ किलो छ ।उत्पादन कम्पनीको ब्रान्ड अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्दा स्पेसिफिकेसनस्तरीय बनाइको छ । र, तेस्रो कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढी बढेकाले साइकल खरिदको लागत बढेको हो ।
यसैगरि, नेकपा एमाले परित्याग गरी भानुभक्त जोशी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्।आज बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जोशीलाई स्वागत गरेका हुन्। नेता नेपालले जोशीलाई पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यमा ल्याउने पनि जानकारी दिए ।
उनले आफूले पार्टी एकता गर्न सकिन्छ कि भनेर एमालेमा धेरै प्रयत्न गरेको पनि सुनाए। तर, पछिल्लो समय दश बुँदे सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको उनको भनाई छ । उनले एमालेमा पूरानै प्रवृत्ति देखिएकोले आजकै मितिबाट एमालेको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुने निर्णय गरेको जनाए। यो खबर केहि समय पहिलेको हो ।
Prevअब प्रहरीका हाकिमले तल्लो तहकाहरुलाई ‘तँ’ भन्न नपाउने ! किन होला त ? जान्नुस
nextबन्जी जम्पका क्रममा यसरी डोरी चुँडिएपछि ८० फिट तल ख’से’र महिलाको मृ ‘त्यु